Usabvumira ani zvake kuti aite Computer yako Device! - Mira Botnets Na Semalt
Robot network kana botnet ndiro boka re zombi dzemakombiyuta kana bhobho iyo inotungamirirwa nevatambi uye inoshandisa mazano akawanda. Botnets inogona kunge yakagadzirwa nemakwikwi emakombiyuta emakombiyuta anotarisa mapurogiramu akafanana kana boka remakombiyuta ane utachiona hwehutachiona nehutachiona. Kana ikangowanikwa pamakombiyuta ako, kunyanya pasina ruzivo rwevashandi, kombiyuta yako ichava zombie, drone kana kombiyuta pasina nguva. Icho hachizoshandi zvakanaka uye hachizopikisi maitirwo evanodzidza. Frank Abagnale, iyo Semalt Mutengi Wekugutsikana Kwevatendi, anotsanangura kuti mumamiriro ezvinhu akadaro, zvirongwa zvinorwisa malware kana chirongwa chinonzi antivirus chinofanira kubvumirwa nekukurumidza.
Tsvina idzi dzinokanganisa mukuoma uye ukuru, dzimwe dzadzo dzakakura apo dzimwe dzidiki - hit it computer services. Mahombekombe makuru ane zviuru zvemarudzi eZombies, uye zviduku zvingangova nemazana mashoma emadrones kana zombies. Botnets yakatanga kuwanikwa munaJuly 2010, apo FBI yakasunga wechiSlovenia. Akanga apiwa mhosva yekuparadzira zvinhu zvinotyisa muzviuru zvemakombiyuta emakombiyuta. Pakati pevhareji, makombiyuta gumi nemamiriyoni akabatwa neutnets. Kune mhando dzakasiyana dzehutsotsi dzehuipi, dzimwe dzadzo dzinogona kuvhara makombiyuta maitiro nenzira imwecheteyo semavirusi kana malware.
> Botnets inoshandiswa nenzira dzakasiyana-siyana, imwe yadzo inotsanangurwa pasi apa:
Kurega Kushanda Kusungwa:
Botnets inoshandiswa kutanga kurwisa pane imwe pakombiyuta foni kana kuti kushungurudza uye kushatisa maitiro kuburikidza nokupamba kubatana. Uyezve, vanopedza bandwidth yenyu uye vanowedzera purogiramu yezvinhu. Kuregererwa Kwebasa Kurwisa (DoS) inowanzoshandiswa kuparadza nzvimbo yepikisano.
Spam uye Traffic Monitoring:
Botnet inoshandiswa kutengesa kakombiyuta yeTCP / IP protocol uye inoshandisa maitiro ayo chaiwo kune iyo. Botnets inowanzoshandiswa mukubatana neZombies dzakawanda uye mavhairusi uye kukohwa ma kero e-mail. Vanotumira nhamba yakawandisa yepam data uye phishing emails kune avo vakaurayiwa. Kazhinji, zombies nemabhodhi zvinoshandiswa kunyengedza zita rekushandisa nephasiwedi yemushandisi kuitira kuti botnet inogona kudzora mabasa ayo nekuishandisa.
Mapurogiramu ekuvhara mukombiyuta yako yakagadzirirwa kuongorora bots uye kuvadzivirira kubva pakukohwa chero rudzi rwemashoko. Zvinosuruvarisa zvikuru kuti mabhota aya akashandurwa kuti ashandure kusachengetedza uye ivo vanoisa keylogger mapurogiramu mumakirini ane utachiona. Keyloggers anobatsira bots kuti vatungamirire uye vanyore mapurogiramu epakombiyuta, iyo inoshandiswa kukanganisa PayPal ID yako kana zvichemo zvekadhi.
Botnets inoshandiswa kuparadzira uye kuparadzira marudzi akasiyana-siyana emavirusi uye mabhodani mumutambo. Vanoshandisa vashandisi mumabasa anonyadzisa uye vanoita makombiyuta avo emakombiyuta uye maIndaneti emaIndaneti. Kana iwe ukatora pabhadha-per-click system, botnets inogona kuwana mari yako yakawanda. Zombies zvinowanzoshandiswa kushandisa ruzivo rwemumwe munhu kuti awane mari kubva pamari yako-per-click systems.